औरङ्गाबाद, महाराष्ट्र - विकिपिडिया
औरङ्गाबाद भारतको महाराष्ट्र राज्यको एक महानगर हो । अजन्ता (अजिन्ठा) र एलोरा (वेरूल) विश्व धरोहर स्थलहरू समेत धेरै नामी पर्यटन स्थलहरू सन्निध हुनाले यो एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र हो । औरङ्गाबाद प्रदेशको एक प्रमुख औद्योगिक शहर तथा शिक्षा केन्द्र हो । यो एक जिल्ला तथा संभाग मुख्यालय पनि हो । औरङ्गाबाद विश्‍वमा अजन्‍ता र एलोराको प्रसिद्ध बौद्ध गुफाहरूको लागि जानिन्छ । यी गुफाहरूको निर्माण २०० ईसा पूर्व देखि ६५० ई. सम्म भएको थियो । यी गुफाहरूलाओओ विश्व धरोहर (वर्ल्‍ड हेरिटेज) मा शामिल गरिएको छ ।
बीबीका मकबरा औरङ्गाबाद
३०० किमी२ (१०० वर्ग माइल)
३,९००/किमी२ (१०,०००/वर्ग माइल)
मराठी, हिन्दी, उर्दु
मध्‍यकालमा औरङ्गाबाद भारतमा आफ्नो महत्‍वपूर्ण स्‍थान राख्छ । औरङ्गजेबले अपने जीवनको उत्तरार्द्ध यहीं व्‍य‍तीत गरेका थिए र यहीं औरङ्गजेबको मृत्‍यु पनि भएको थियो । औरङ्गजेबकी पत्‍नी रबिया दुरानीको मकबरा पनि यही छ । यस मकबराको निर्माण ताजमहलको प्रेरणाबाट गरिएको थियो । त्यसैले यसलाओओ 'पश्चिमको ताजमहल' पनि भनिन्छ ।
१ पर्यटन स्थल
१.१ बी‍बी का मकबरा
१.३ ध्‍वंस अवशेष
१.५ बानी बेगम बाग
१.६ औरङ्गाबादका गुफाहरू
बी‍बी का मकबरासम्पादन
यस सुन्दर इमारतलाई स्‍थानीय मान्छे ताजमहलको जुड़वा रुप मान्छन् । तर बाहिरको मन्छे यसलाई ताजमहलको फूहड नकल मान्छन् । यसलाई औरगजेबको छोरा आजमशाहले आफ्नो माता रबिया दुर्रानीको यादमा बनएका थिए । यो इमारत अझै पनि पूर्णत: सुरक्षित अवस्‍था मा छ । यसै शहरमा अर्को भवन छ जसलाई सुनहरी महल भनिन्छ ।
प्रवेश शुल्‍क: भारतीयहरूको लागि १० रु. तथा विदेशिहरूको लागि १०० रु समय: बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म
यस पनचक्‍कीको निर्माण राजा मलिक अम्बरले गराएका थिए । यस पनचक्‍कीमा पानी ६ किलोमीटरको दूरीदेखि माटोको पाइपदेखि आउथ्यो । यसको चैन्बरमा फलामको पङ्खा घुम्थ्यो जसबाट ऊर्जा उत्‍पन्‍न हुन्थ्यो । यस ऊर्जाको उपयोग आटाको मिललाई चलानमा गरिन्थ्यो । यस मिलमा तीर्थयात्रिहरूको लागि अनाज पिसाइन्थ्यो । यसै स्‍थानमा कुम नदीको बाया तटमा बाबा शाह मुसाफिरको मजार छ । औरङ्गजेब बाबा शाहको धेरै आदर गर्थे । यो मकबरा रातो रङ्गको साधारण पत्‍थरबाट बनाइएको थियो । यो मकबरा सन्तको सादगीको प्रतीक हो ।
प्रवेश शुल्‍क: भारतीयहरूको लागि ५ रु. तथा विदेशिहरूको लागि १०० रु समय: सूर्योदय देखि सूर्यास्‍त सम्म
औरङ्गाबाद शहरमा धेरै दरवाजाहरू का अवशेष पनि छ । यी ध्‍वंस अवशेषहरूमा दिल्‍ली, जालान, पैठन तथा मक्‍का रा॓शन दरवाजा शामिल छन् । यस बाहेक धेरै भवनहरूको अवशेष पनि छ । नकोंडा पैलेस, किला अर्क तथा दामरी महल आदिको अवशेष यहा छ ।
पुरानो शहरमा फैलिएको यो मस्जिद र दरगाह लगातार उपयोगमा आउनको कारण राम्रो अवस्‍थ‍ामा छ । यी भवनहरूमा जामा मस्जिद प्रमुख छ जुन निजाम र मुगल दुवैको शासन कालमा आफ्नो महत्‍व राख्थ्यो । जामा मस्जिद बाहेक शाह गन्ज मस्जिद, चौकीको मस्जिद (यस मस्जिदको निर्माण औरङ्गजेबका काकाले गराएका थिए) आदि इमारतहरू पनि देख्न योग्‍य छन् । शहरको उत्तरमा पीर इस्‍लामको दरगाह छ । यस दरगाहमा औरङ्गजेबको शिक्षकको समाधि छ ।
बानी बेगम बागसम्पादन
यो सुन्दर बाग औरङ्गाबाददेखि २४ किलोमीटर दूर स्थित छ । यस बागमा बनेको बेगमको समाधि बनिएको छ । बानी बेगम औरङ्गजेबको पत्‍नी थिइन् । यस मकबरमा भव्‍य गुन्बद, पि‍लर तथा फव्‍बारे छन् । यो मकबरा दक्‍कन प्रभावित मुगल वास्‍तुशैलीको सुन्दर नमूना हो ।
यो गुफाहरूको शहर देखि केहि किलोमीटर दूर उत्तरमा स्थित छ । यी गुफाहरूमा बौद्ध धर्म सम्बन्धित चित्रकारी गरिएको छ । यहा कुल दस गुफाहरू छन् जुन कि पूर्व र पश्‍िचमी भागमा बाटिएको छ । यी गुफाहरूमा चौथी गुफा सबैभन्दा पुरानो हो । यस गुफाको बनावट हीनयान सम्‍प्रदायसग सम्बन्धित वास्‍तुशैलीमा गरिएको छ । यी गुफाहरूमा जातक कथाहरू सम्बम्धित चित्रकारी गरिएको छ । गुफामा बुद्धलाई एक जैन तीर्थंकरको रुपमा दर्शाइएको छ । प्रवेश शुल्‍क: भारतीयहरूको लागि १० रु. तथा विदेशिहरूको लागि १०० रु समय: बिहान ९ बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=औरङ्गाबाद,_महाराष्ट्र&oldid=584058" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २९ नोभेम्बर २०१६, १३:४२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:४२, २९ नोभेम्बर २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।